October 2014 - Page2of2- DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 15 Oct, 2014
Next on DVB Debate: Sim Card
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ လွန်စွာမှ ခက်ခဲလှတဲ့ နှစ်ကာလပေါင်းများစွာကို ကျော်လွန်ပြီး ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ငွေကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ ၀ယ်ယူအသုံပြုနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတောင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နေရာအနှံ့ဝယ်ယူနိုင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲမျိုစုံကြား ထဲကမှ အခုလိုဝယ်ယူအသုံးပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဆယ်လူလာလို့ခေါ်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ...
· by DVBDadmin · 11 Oct, 2014
Highlights from the Ethnic Views Debate
Highlights from DVB Debate’s Ethnic Views show “Who listens to ethnic voices?” 30/08/2014 —————————————— “ဘဏ္ဍာခွဲဝေမှု၊ သယံဇာတခွဲဝေမှု.အာဏာခွဲဝေမှုတွေ အားနည်းခဲ့တယ်။ ပြည်နယ်တွေက ဘာမှမရသလောက်ပဲ.ပြည်နယ်တွေကိုလေ့လာထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်. ပြည်နယ်တွေမှာရတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေက ၃%ပဲရှိတယ်. ကျန်တဲ့ ၉၇% က ဗဟိုအစိုးရဆီမှာ။” အေးမောင်ကျော် – စာရေးဆရာ၊ ဆောင်းပါးရှင်“There are...
· by DVBDadmin ·4Oct, 2014
Highlights from the Federalism Debate
04/10/2014 “Can federalism beasolution?” —– “ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့က လူထုပါဝင်မှုအားနည်းနေတယ်. အစိုးရက နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖက်ဒရယ်မူဟာ ခွဲထွက်ရေးမူဆိုပြီး အသိရိုက်သွင်းခံထားရတာကြောင့်ပါ” မင်းချမ်းထိုက် – Myanmar Journalism Institute “There is stillalack of public participation regarding federalism. This is because the public...
· by DVBDadmin ·3Oct, 2014
Press Kit: Federalism
FACTS •The first Panglong agreement was negotiated in 1947 and promised ethnic minorities federalism with autonomy and right to secession but these promises were never implemented. • The Civil War in Burma began in...
· by DVBDadmin · 1 Oct, 2014
Next on DVB Debate: Federalismasolution?
ဖက်ဒရယ်ဆိုသည်မှာ အစိုးရ နှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဒေသန္တရ အစိုးရကြား အာဏာခွဲဝေမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစိုးရ နှစ်ရပ်ကြား အာဏာခွဲဝေမှုတွေကို အခြေခံ ဥပဒေက သတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာ နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေမှာတော့ ဖက်ဒရယ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်လောက်အောင် အာမခံချက်မပေးထားပါဘူး။ နယ်မြေကျယ်ဝန်းပြီး လူမျိုးနွယ်စုတွေ များပြားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖက်ဒရယ်ကိုကျင့်သုံးကြပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရကို ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရေးအရ ၀ါဒမှိုင်းတိုက်မှုတွေကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့...